တရုတ်နိုင်ငံက ပြည်နယ်အဆင့် ဒေသ ၄ ခုသို့ COVID-19 အလုပ်အဖွဲ့များ စေလွှတ် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း ဆန်ရှီးပြည်နယ် Yulin မြို့ရှိ Zhaojiamao ကျေးရွာ၌ အနီရောင် သစ်ရွက်များအား အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံရှိ အတွင်းမွန်ဂိုလီးယား ၊ ကန်းစု ၊ ဆန်ရှီး နှင့် နင်းရှ အပါအဝင် ပြည်နယ်အဆင့် ဒေသ ၄ ခုသို့ ဒေသတွင်း COVID-19 ရောဂါ တုန့်ပြန်သည့် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအား လမ်းညွှန်ရန် အလုပ်အဖွဲ့များအား စေလွှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါအလုပ်အဖွဲ့များအား အမျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မရှင်နှင့် ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး အမျိုးသားအဆင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တို့က စေလွှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း တာဝန်ရှိသူများက အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
BEIJING, Oct. 18 (Xinhua) — Task forces have been dispatched to four of China’s provincial-level regions, including Inner Mongolia, Gansu, Shaanxi and Ningxia, to guide local COVID-19 response efforts.
The working teams were sent by the National Health Commission and the national administration of disease prevention and control, according to authorities on Monday. Enditem
Photo – Aerial photo taken on Oct. 14, 2021 shows the red leaves in Zhaojiamao Village of Guta Town, Yulin City, northwest China’s Shaanxi Province. (Xinhua/Tao Ming)